Jonga indawo isantya Xintai of pa parlour
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Jonga indawo isantya Xintai of pa parlour
Kanye phezu ixesha elibe pa kufana isiganeko enkulu Ethetha replacement Xintai, ukuba oko kwenziwe ngesantya omalunga kanye omnye okanye iinyanga ezimbalwa kule nyanga. Okwangoku akukho utshintsho iziganeko ezibalulekileyo ukwenzela ukutsala abathengi, kodwa ebuzwa kuye abe rhoqo eyaneleyo azilingani. Kukho kwakhona omnye imimiselo ngentsimbi ayithimba, kodwa isantya ukwenza ezinye Xintai, iimeko site kunye nomthengi isiseko, kuya kwahluka ngenxa yeemeko ishishini pa. Ethetha kwi iimeko indawo
, kwi pa onendawo zegumbi pa kunye phambi sikhululo kwindawo edolophu, Xintai replacement iye yenziwa ngeveki nganye. Isizathu soku kukuba, kule ndawo edolophu kunye phambi esitishini, ukhulisa kukuba ukhuphiswano kwamane nesendlu fans bebekelwa iye ngogonyamelo. Xintai, iye yaba yorhwebo ebaluleke kakhulu ukuze atsale abathengi.
ebumelwaneni of pa parlour na, ukuba ukusungulwa imifuziselo ezithandwayo kukuninzi, iya kuba njani imeko kunqandwa Kuna ukuba isebenza kakhulu. Ukuze kuthintelwe imeko, liya angafuni ngokuthi unike elingana inombolo inani ngokuqaliswa yeevenkile kubamelwane waba ingcaciso evela abenzi. Xa pa parlour yesixeko, amaqhinga baye yenziwa ngeveki nganye, mna isantya replacement Xintai uya usiba ngakumbi Ukuze ngokukhawuleza.
Noko ke, umatshini pa kuya kubakho amakhulu amawaka yen enye ngalinye. Ukutshintsha Xintai, oko ngeendleko kakhulu kuthatha. Ngokukhawuleza Xa usazisa iiyunithi ezili-10, iya kuba iyunithi yezigidi yen.
oko, into yokuba kuza sengozini iindleko njengoko veki, yaye uphelelo kunye lokuyimfihlo, ukuze kwandiswe ngakumbi ingeniso, yinguqulelo ekufuneka ukuba bachache endilisekileyo. Pa parlour, ezifana neevenkile ndibotshwe lukhulu, kodwa hayi kangako bachache ngokupheleleyo, ngamandla mali, nesendlu kakhulu pa, ngakumbi, nesendlu pa ndasibeka eninzi Xintai oku akuthethi andahexa wabuya wachacha ukusuka emva ezimbalwa kweentsuku indawo ukuba, kukho kwakhona kwimeko apho umsebenzi uya kuwa phambi kokuthatha yenzuzo.
Ukongeza, abenzi pa parlour, kanzulu kakhulu kukuba eTokyo eselumelwaneni prefectures Ngaba nawe. Kwimeko elibe pa kwi edolophu, nguye umthengi le flow fast, ungakwazi ukufumana ukuba bathenge iimeko Xintai ndasisa eninzi iyunifomu yakho. Ngokwahlukileyo kwimeko kwivenkile ipoma, Xintai replacement iya kuba malunga nesiqingatha kwivenkile edolophu. Ethetha kutheni, ngokungafaniyo pa parlour yesixeko, yaye into yokuba kwivenkile encinane ukukhuphisana ebumelwaneni, zabasebenzisi benkonzo ivame ukuya kwiziko, na inxalenye ngamaxa amaninzi intshukumo kakhulu.
bakhuphisane kuba kuthetha ukuba elinye iqela ayikho, kwaye akubikho nemfuno yokuzisa oomatshini abatsha kwi phezulu ungxamile. Ukongeza, ukuze babe isiseko ngumthengi naye ishishini elo ziko rhoqo, sidla ukuqaliswa itafile esetyenziswa ngaphezu ukunyuka kuma yakutshanje. Njengoko oku, kodwa ukutshintshwa isantya edolophu kunye ledlelo nesendlu pa babone isizathu sokuba ezahlukeneyo, akukho mfuneko yokuba khona ibuyambo ekhawulezileyo xa intengiso bane kuqaliswa Xintai.
Xintai ezazixhaphakile ezingoovimba wobuyiselo, Ngoko ke yintoni na ukwenza, okanye iseti recovery ukwazisa umandlalo kabuhlungu ukulingana lonke, esenza kuba intengiso kunyuka, ezingeenxa kuphela apha kukho ukubona xa kusakhelwa ngemihla .
nguye isikali yokuthengisa ye nkampani, kubonakala abantu abaninzi ukuba musa ikhokelele ingcamango ukhetha indawo yokutyela entle kwindawo enjalo imbono, masikhe ndikuphaphele kancinane. Xintai ezazixhaphakile ezingoovimba nokutshintsha, Ngoko ke yintoni na ukwenza, okanye iseti recovery ukwazisa umandlalo kabuhlungu ukulingana lonke, esenza kuba intengiso kunyuka, ezingeenxa kuphela apha kukho ukubona xa kusakhelwa ngemihla.
nguye isikali yokuthengisa ye nkampani, kubonakala abantu abaninzi ukuba musa ikhokelele ingcamango ukhetha indawo yokutyela entle kwindawo enjalo imbono, masikhe ndikuphaphele kancinane.